भारतले पाकिस्तानको विश्वकप क्रिकेटमा सातो लिएपछि..
२ असार, २०७६ शीतलपाटीन्युज डटकम 4753
आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा भारतले तेस्रो जित निकालेको छ । पाकिस्तानलाई डीएल पद्दतिको आधारमा ८९ रनले पराजित गर्दै भारतले तेस्रो जित निकालेको हो । आईसीसी विश्वकपको हाई भोल्टेज गेममा भारत र चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई ३३७ रनको लक्ष्य दिएको थियो । ४६.४ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर ३०४ रन बनाएका बेला पानी परेपछि आधा घण्टासम्म स्थगित भएको खेल पुनः सुरु भएको थियो ।
वर्षा हुँदा ७१ रन बनाएर क्रिजमा रहेका कप्तान विराट कोहली खेल सुरु भएपछि व्यक्तिगत खातामा ६ रन थप्दै ७७ रन बनाएर आउट भए। कोहली आउट हुँदा भारतको स्कोर ५ विकेटको नोक्सानीमा ३१४ रन रहेको थियो । म्यानचेस्टरको वल्ड ट्राफोर्डमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले उत्कृष्ट सुरुवाआत गर्‍यो । भारतका रोहित शर्माले शतक बनाउँदा अर्का ओपनर केएल राहुल र कप्तान विराट कोहलीले अर्धशतक बनाए ।भारतीय नियमित ओपनर शिखर धवन अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा घाइते भएपछि उनको ठाउँमा राहुलले ओपनिङ गरेका थिए । रोहितलाई गतिलो साथ दिएका राहुलले अर्धशतक बनाउँदै आउट हुँदा भारतले १३६ रन बनाएको थियो । ७८ बल खेल्दै ५७ रन बनाएका राहुल वहाव रजिबको बलमा बाबर आजमको हातबाट क्याच आउट भए । राहुलले आफ्नो इनिङ्समा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
राहुल आउट भएपछि मैदान आएका कप्तान बिराट कोहली र रोहित मिलेर भारतको स्कोर २३४ रन पुर्याएका थिए । ९८ रनको साझेदारी गरेपछि भारतको स्कोर कार्ड ठूलो बनेको थियो । जसमा रोहित १४० रन बनाएर आउट भए । आक्रामक पारि खेलेका रोहितले ११३ बलमा १४ चौका र ३ छक्काको मद्दतले १४० रन जोडेका हुन् ।उनले शतक भने ८५ बलमा पूरा गरेका थिए । शतक बनाउँदा ९ चौका र ३ छक्का प्रहार गरेका थिए । बाँकी ४० रन बनाउँदा छक्का प्रहार गर्न नसेके पनि ५ चौका भने थप्न सफल भए ।केएल राहुलले ओपनिङ आएपछि चौथो नम्बरमा अल राउण्डर हार्दिक पाण्ड्याले २६ रनको योगदान गरे । उनले आफ्नो इनिङ्समा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे ।
पाण्ड्या आउट भएपछि विकेट किपर व्याट्सम्यान महेन्द्रसिंह धोनी क्रिजमा आएका थिए । तर धोनी क्रिजमा भने टिक्न सकेनन् । उनी जम्मा १ रन बनाएर आउट भए । पाँचौं विकेटको रुपमा कोहली ७७ रन बनाएर आउट भए । त्यसपछि क्रिजमा रहेका विजय शंकर र केदार जाधवले स्कोर कार्ड ३३६ सम्म पुर्‍याए ।विजय शंकर १५ रनमा नट आउट रहँदा केदार जाधव ९ रनमा नट आउट रहे ।पाकिस्तानका मोहम्मद आमिरले ३ विकेट लिँदा हसन अलि र वहाव रियाजले एक एक विकेट लिए ।३ सय ३७ रनको लक्ष्यसहित पाकिस्तानले जवाफी ब्याटिङ गरिरहदा वर्षाको कारण खेल केहि समय रोकिएको थियो ।वर्षाले प्रभावित गरेपछि खेल ४० ओभरमा झारिएको थियो र डीएल पद्दतिको आधारमा पाकिस्तानले ३ सय २ रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो ।
भारतले दिएको नयाँ लक्ष्यसहित ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले पुरै ४० ओभर खेल्दै ६ विकेट गुमाएर २१२ रन मात्र बनाउन सक्यो । वर्षाले खेल रोकिनुअघि पाकिस्तानले ३५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १६६ रन बनाएको थियो । पाकिस्तानका लागि फकर जमानले ६२ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेपनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन् । यस्तै बाबर आजमले ४८ तथा इमाद वासिमले अविजित ४६ रन बनाए । शादव खान २० रनमा अविजित रहे । भारतका विजय शंकर, हार्दिक पाण्डया र कुलदिप यादवले २।२ विकेट लिए ।
China Bakery Plastic Cake Box
Pressure Washing Protective Clothing
Calcium Lignosulfonate In Concrete
Bucks County: Catholic school enrollment up amid COVID-19 pandemic
Pyrolysis Tyre System
China Hdpe Pipe Roll Water Supply
Hdpe Pipe Roll Water Supply Supplier
Welding Generator Manufacturers In China
China Silicone Bra and Women Bra price
Buy squash ball machine
China Diy Camera Stabilizer Pvc
3mm Radius Router Bit
Boron Added Polyethylene Sheet For Research Center
Automatic Truck Loading And Unloading Machinery
China Wholesale Cnc Wire Cable Factory
Pvc Ceiling Panel Window Profile Extrusion Line
Alza Rear Wiper Size
Double Glazing Locks And Handles
Gear Wheels Review
LouisVuitton??????????? Pulverizer Machine For Sale
????????? Eames Fiberglass Armchair Shock Absorber
नेपालमा बरामद भएका अढाइ लाख किलो रक्तचन्दन भारतले फिर्ता नलगेपछि...